श्रीमतीका यी ५ गोप्य कुराहरु श्रीमानलाइ कहिल्यै थाहा हुदैनन ! – AB Sansar
October 15, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on श्रीमतीका यी ५ गोप्य कुराहरु श्रीमानलाइ कहिल्यै थाहा हुदैनन !
उनीहरुले एकअर्काका दुःख सुख साट्ने गर्दछन् र समस्यामा भएमा एकअर्कालाई सहयोग गर्दछन् भन्ने मा’न्यता हाम्रो समाजमा रहेको पाइन्छ । तर कुनै कुनै कुरा यस्ता हुन्छन् जसलाई उनीहरुले एक अर्कालाई क’हिल्यै भ’न्दैनन् । त्यस्तै हरेक महिलाले आफ्नो पतिबाट लु’काएर राख्ने केही कुरा छन् ।’ *** भिडियो हेर्नको लागि यहाँ तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला ****
५. घरेलु प्रयोजनका लागि सरसामान किन्दा बचेको पैसालाई महिलाले निकै जतन गरेर राख्दछन् । यस्तो पैसालाई गोप्य तथा सुरक्षितसाथ राख्दछन् । तर पतिलाई यसबारे कहिल्यै पनि थाहा हुदैन । आवश्यक परेको बेला भने पतिलाई त्यही पैसाले सहयोग गर्दछन् । *** भिडियो हेर्नको लागि यहाँ तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला ****
आमालाई शान्तवना दिँदै सम्झाएर आउँछु त हाँस्दै भने तर म मनभरी रोइरहेकी थिए : शान्ती (भिडियो हेर्नुहोस)